SONGZ Umlando | ISongz Automobile Air Conditioning Co., Ltd.
I-SONGZ AUTOMOBILE AIR CONDITIONING CO., LTD. yasungulwa ngo Shanghai.
I-SONGZ iqale kusuka ebhizinisini lokupholisa umoya ngebhasi, futhi yaqala ngo-zero.
Kusungulwe iXiamen SONGZ, ebigxile ku-R & D, ekwenziweni kwamayunithi wokupholisa umoya webhasi.
Ngawo lowo nyaka, kwaqalwa isigaba somoya wezimoto zabagibeli i-SONGZ, sazinikela ku-R & D, ukukhiqizwa nokumaketha kwesiphephetha-moya semoto yomgibeli, i-HVAC nezinye izingxenye zokhiye ezibalulekile.
IBHIZINISI lokupholisa umoya belikhula unyaka nonyaka.
IShanghai SONGZ Ifektri yesibili yaqedwa, eyayenzelwe njengesisekelo esibanzi sokwenza amayunithi wokupholisa umoya wamabhasi nemoto.
I-Anhui SONGZ yasungulwa, okuyibhizinisi elihlanganyelwe phakathi kwe-SONGZ ne-JAC.
I-Chongqing SONGZ yasungulwa. IChongqing SONGZ ibigxile ekwakhiweni kwesiphephetha-moya semoto.
I-SONGZ ikhonjwe yiShanghai Science and Technology Committee njengebhizinisi elisha eliphezulu laseShanghai.
Ngawo lowo nyaka, i-SONGZ yaklonyeliswa yiShouqi Group njenge-Olimpiki yaseBeijing "Service Champion" ngokusebenza okuhle kanye nokwesekwa ngesikhathi sama-Olimpiki aseBeijing.
Isitifiketi High-tech Enterprise of Shanghai
"Umpetha Wensiza" wase-Beijing
I-Shanghai SONGZ Railway Air Conditioning Co., Ltd. yasungulwa, yanikela ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni i-air conditioning transit air conditioner.
Ngokuthuthuka kweminyaka engaphezu kwengu-10, i-SONGZ inezinhlobo ezahlukahlukene zama-AC ezimoto zezitimela, njenge-AC yezitimela, isitimela, i-monorail, i-metro (ongaphansi komhlaba, ongaphansi komhlaba) tramu njalonjalo.
I-SONGZ ibhalwe ohlwini lweShenzhen Stock Exchange (ikhodi yamasheya: 002454) futhi yaba yinkampani yokuqala efakwe ohlwini embonini yezokuthutha izimoto yaseChina.
Ngawo lowo nyaka, i-SONGZ yaklonyeliswa njengebhizinisi lobuchwepheshe elithuthukiswe ngemali evela kwamanye amazwe.
Beijing SONGZ kanye neSuperCool (shanghai) Refrigeration Co, Ltd. yasungulwa.
IBeijing SONGZ ibizinikele ekwenziweni kwezinhlelo zokupholisa umoya zezimoto zabagibeli.
ISupercool ibambisene phakathi kweqembu le-SONGZ ne-CIMC (China International Marine Containers Co., Ltd, okuyizitsha ezinkulu zasolwandle ezenziwa emhlabeni.) ISupercool igxile ku-R & D, ekukhiqizeni nasekukhangiseni uhla oluphelele lwamayunithi efriji eloli iketanga elibandayo.
ILiuzhou SONGZ yasungulwa, yanikela ekwakhiweni kohlelo lokupholisa umoya lweMPV, iSUV, imoto nemoto kagesi.
Ifemu yesithathu ye-Shanghai SONGZ yaqedwa, manje eyi-HQ yeqembu le-SONGZ. Lokhu futhi kuyisisekelo sokukhiqiza esihlakaniphile nesinokuthuthuka samayunithi wokupholisa umoya wemoto, amayunithi wokupholisa umoya webhasi, i-air conditioner compressor ne-compressor kagesi, nezingxenye zokungcebeleka.
I-Indonesia SONGZ yasungulwa. Lokhu bekuyimboni yokuqala ye-SONGZ yaphesheya kwezilwandle, okuyisinyathelo sokuqala secebo le-SONGZ lembulunga yonke, elilandelwa yiLumikko eFinland.
I-SONGZ ithole futhi yabamba amasheya eSuzhou NTC, Beijing Shougang Foton naseFinland Lumikko.
ISuzhou NTC wuhlobo oludumile lwe-air conditioner emakethe yaseChina. Ngokutholwa, i-SONGZ ne-NTC benze inyunyana eqinile emakethe yezobuchwepheshe, imikhiqizo, ukuthengisa, insizakalo.
ILumikko, umkhiqizo odumile eYurophu futhi ingumkhiqizi wekhwalithi ephezulu yamadivayisi wokulawula ukushisa kwamaloli nezinqola ezilahlwayo. Kuyinto uhlelo iphuzu yesondlo ngokugxila okuqinile n amazwe aseNordic.
I-SONGZ ingenise isikhumbuzo seminyaka engama-20 kwasungulwa isikhungo somhubhe womoya wesimo sezulu.
Ngawo lowo nyaka, i-SONGZ yaqopha umlando ngokukhiqiza amayunithi angaphezu kwe-10,000 (izinkulungwane eziyishumi) ze-air conditioner ngenyanga eyodwa ngo-Nov.
I-SONGZ inikeze inani lama-54,049 amayunithi we-air conditioner emakethe yaseChina nakwamanye amazwe, kufaka phakathi amayunithi angama-28,373 wesimo sokupholisa amabhasi kagesi ngo-2018.
I-SONGZ INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. yasungulwa, okwakuyisinyathelo esengeziwe somhlaba wonke we-SONGZ.
Ngawo lowo nyaka, i-SONGZ yamemezela isu lokusungula inethiwekhi yezinsizakalo zomhlaba wonke ngokuba neziteshi zosizo okungenani eziyi-100 emhlabeni ezivela eChina, ukuze zinikeze izinsizakalo ezifika ngesikhathi kumakhasimende ethu aphesheya.
Ngesikhathi esifanayo, ukukhiqizwa kwasendaweni yaseLumikko China kwaqalwa ngenkathi uphiko lokuqala lwe-LT9 kanye neyunithi ye-L6BHS yesitshalo saseLumikko eShanghai bengekho kulayini wokuhlangana.
I-SONGZ ithole isabelo esingu-55% kuKeihin-Grand Ocean Thermal Technology (Dalian) Co.Ltd , okuyinkampani yaseJapan ehlonishwayo futhi ehola phambili ekhethekile embonini yokupholisa umoya.